Vanyori venguva ino veSpanish, vamwe vamiririri mapeni | Zvazvino Zvinyorwa
Vanyori veSpanish vanyowani
Vanyori vemazuva ano veSpanish vakazivikanwa nekuwanda kwazvo. Mumakumi emakore achangopfuura nyika yakaona kuzvarwa kwematanho ane mukurumbira anoenderera mberi nekuvandudza mabhuku ayo. Naizvozvo, vanyori ava vanogona kunzi vakakodzera vagari venhaka yakasiyiwa naCervantes, Lope de Vega, Lorca, Quevedo, Bécquer, Pérez Galdós, pakati pevamwe "magamba."
Kuburikidza nemhando dzakasiyana, vanyori ava vakwezva vateereri vavo munyika nepasi rese. Vamwe vacho vakatowana mamirioni edhijitari, akadaro Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) naArturo Pérez-Reverte. Saizvozvowo, zvakakosha kucherechedza basa revane tarenda vechidiki vakaita saNacho Carretero kana Francisco Javier Olmedo. Tevere, runyorwa nechikamu chevanyori ava.
Musi waNovember 25, 1951, guta reSpain reCagagagena rakaona kuzvarwa kwaArturo Pérez-Reverte Gutiérrez. Akawana degree rake reJournalism kubva kuComplutense University yeMadrid, basa raakadzidzira kubva muna 1973 kusvika 1994. Saizvozvo, Kufukidza kwake kwakakosha yaive yeFalklands hondo, hondo muBosnia uye coup muTunisia..
Kunyangwe rake rekutanga basa semunyori raive rekufungidzira Hussar (1986), mabasa ainyatsomupa kusazivikanwa aive Tafura yeFlanders (1990) uye Iyo kirabhu yeDumas (1993). Makore matatu gare gare akaburitsa nhoroondo yenhoroondo Captain Alatriste (1996). Iri zita remusoro Yakatengesa mamirioni emakopi uye yaive yekutanga mune 7-bhuku saga.
Kubva 2003, Arturo Perez-Reverte ndeyeboka revanhu vane mifananidzo yeRoyal Spanish Academy (RAE), kwaanogara armchair T. Muna 2016 akagadzira webhusaiti yemabhuku "Zenda" uye akapa Falco, chikamu chekutanga chetrogogy yakabudirira yakazopera naEva (2017) uye Sabotage (2018). Muna 2020 mabasa ake achangopfuura akasvika: Mutsara wemoto y Bako rema cyclops.
Musi waSeptember 25, 1964, kuDel Pilar Clinic muBarcelona, ​​Carlos Ruiz Zafón akazvarwa. Zvidzidzo zvake zvekutanga zvakaitwa kuColegio de los Jesuitas de Sarria. Kubva ari mudiki kwazvo airatidza kufarira kunyora; Ini ndakagadzira zvidiki-3-peji nyaya pakati peanotyisa uye evatorwa madingindira. Aingova nemakore gumi nemashanu, akapedza bhuku rake rekutanga rakanzi: Iyo Harlequin Labyrinth.
Pakati pegore rake rekutanga muRuzivo Sayenzi (Autonomous University yeBarcelona), akagamuchira chinzvimbo chebasa mumunda wekushambadza Akashanda nemakambani ane mbiri. Ogilvy, Dayax, Tandem / DDB uye Mc Cann World Boka. Akaita mishandirapamwe yekushambadzira ye Volkswagen, kusanganisira iyo ye gorofu uye sirogani yake: "kusvika ipapo pakutanga hakuna kukosha, asi mumwe munhu anofanira kuzviita".
Muna 1992, Ruiz Zafón akasiya chikamu chekushambadzira kuti azvipire zvizere kuzvinyorwa. Kwapera gore akaburitsa bhuku rake rekutanga, Muchinda weMist. Iri zita remusoro inomiririra auspicious literary debut, sezvo yaive iye akahwina mubairo weEdebe. Uyezve, nyaya yake yakaenderera mberi Muzinda wehusiku (1994) uye Mwenje yaSeptember (1995) kupedzisa iyo Fog Trilogy.
Basa rake rakatanhamara kwazvo rakaonekwa mugore ra2000, Mumvuri wemhepo. Nebhuku iri, munyori wechiSpanish akawana chikamu che "bestseller", nekuda kwemakopi ake anopfuura mamirioni gumi nemashanu akatengeswa. Carlos Ruiz Zafon akashaya musi waJune 19, 2020 muguta reLos Angeles, United States, mushure mekutambura kwemakore maviri nekenza yekoloni.
Muna 1981, guta reSpain reLa Coruña rakaona kuzvarwa kwaNacho Carretero Pou. Kubva zvaaive mudiki akakurudzirwa kunyora nambuya vake. Akadzidza firimu ku TAI University Chikoro cheBhizinesi. Gare gare, akatanga basa rake rezvenhau kuRadio Coruña, Cadena SER. Mukufananidza, akashanda semupepeti wemagazini Nyora pasi, Xl Vhiki, Orsai y Chii!, pakati pevamwe. Zvakare, aive chikamu chepepanhau El Mundo.
Panguva yese yebasa rake rezvenhau, akaita mishumo inoshamisa padanho repasi rose. Pakati pazvo, kuuraya vanhu muRwanda, Ebola hutachiona muAfrica, kutengeswa kwezvinodhaka muGalicia nehondo yevagari vemo muSyria. Muna 2015 akaburitsa bhuku rake rekutanga: Farina, iyo yakakurumidza kuzvimisikidza senhamba 1 mukutengesa. Gare gare basa rakashandurwa kuita nhepfenyuro yeTV na Netflix, uko kwainakidzwa nevateereri vakawanda.
Imwe yemabasa akatanhamara aNacho Carretero ndeye Pamutsara werufu (2018), zvichibva nenyaya inopokana yaPablo Ibar. (Rimwe gore gare gare Movistar Plus Ini ndinoburitsa mazita asingazivikanwe). Muna 2018 akapa Zvinoita kunge zvirinani kwatiri, chinyorwa chinoshungurudza nezve nhoroondo yeDeportivo La Coruña timu yenhabvu. Pakupedzisira, muna 2019 mutambo uyu wakaburitswa Farina, nerwendo rwakabudirira rweGalicia.
Fernando Aramburu Irigoyen akaberekwa muna 1959 muguta reSan Sebastián (guta guru redunhu reGuipúzcoa), Basque Nyika. Muna 1983 akawana dhigirii muSpanish Philology kubva kuYunivhesiti yeZaragoza. Munguva yehudiki hwake aive wevaivamba veCLOC Boka, chiitiko chaakaratidzira mune rake rekutanga bhuku. Moto ine ndimu (1996), anokunda mubairo weRamón Gómez de la Serna.
Muna 1985 akatamira kuGerman, kwaakatanga kuzvitsaurira pakudzidzisa mutauro wechiSpanish kumhuri dzehama. Gare gare, akapa bhuku rekutanga re Antibula Trilogy, Empty maziso (2000). Iri zita rakaenderera mberi Hwamanda yeUtopia (2003) uye Bami hapana mumvuri (2005). Muna 2009 akasiya kudzidzisa kubata nemabhuku chete.
Nhasi, Fernando Aramburu munyori anozivikanwa, munyori wenhau, mudetembi uye munyori wenyaya.. Pakati pezvinyorwa zvake zvinonyanya kuzivikanwa zviri Hove yekuvava (2006) - anokunda mubairo weRAE, pakati pezvakawanda uye zvakakosha kucherechedzwa- uye Patria (2016). Iri bhuku rekupedzisira raive rakakodzera iyo National Prize yeMabhuku.
Iye Cordoba munyori akaberekwa muna 1980, parizvino ari mumwe wevamiririri vakuru mumitambo inonakidza uye yesainzi. Kubva achiri mudiki airatidzira fungidziro yake inoshamisa, dzimwe nguva aine madimikira erima uye asiri echokwadi. Kunyangwe aifarira mabhuku, muna 1998 akafunga kudzidza Computer Engineering, asingazive kuti izvi zvaizochinja hupenyu hwake zvachose.
Sezvo muvhiki yake yekutanga yemakirasi iye "akasangana" (kuburikidza neshamwari) Howard Phillips Lovecraft, mumwe weanonyanya kutsigira kutya. Nhoroondo dzemunyori weAmerica dzakabatsira Olmedo kutungamira iwo ese mazano akabatwa mumafungidziro ake kubva paudiki. Muna 2016, akakudza "chipangamazano" mubhuku rake rekutanga, Vestiges epasi rakakanganikwa.
Pakati pemabasa ane mukurumbira aOlmedo Vásquez ndeaya: Pasi petsoka dzedu (2017) uye Bastard (2019). Ivo vaviri vakahwina mubairo weForolibro Award (yakanakisa nganonyorwa mune e2018 uye 2020 editions, zvichiteerana). Zvinyorwa zvake zvichangobva kuitika ndeizvi Vana vemhute (2019) uye Mupostora wechina (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Vanyori veSpanish vanyowani
Rafael Lopez Flores akadaro
MuSpain, vakadzi, mazuvano, havanyore? Kwaziso
Pindura kuna Rafael López Flores
Harry Hole. Vaverengi Vanotaura Nezve Hunhu hwaJo Nesbø